Mmebe nke Ọdachi | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 8, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Ọtụtụ ọnwa gara aga, enwere m mmasị na ya Ihe nke Dreamhost nghọta mgbe ọ bịara na ọdachi ebe saịtị ndị ahịa ha dara maka ogologo oge.
Izu ụka a, achọrọ m ikpori ndụ! Mgbe m nwetasịrị ihe kachasị njọ, na-eme ka saịtị m gbadata (n'ihi ụfọdụ ntọala MySQL), etinyegoro m saịtị ahụ. Enwere m 100Gb nke bandwidth (anaghị m abịa nso iji) na 10Gb nke ohere. Ejiri ya nke ọma maka ndị ahịa m n'ụfọdụ nchịkọta mara mma m nwere ike ịchịkwa.
Ihe m na-aghọtaghị bụ olu ohere m ga-eweta mgbe m gbanwere na akaụntụ m, n'agbanyeghị. M ọsọ ọsọ okpukpu atọ na ihe nkesa ma weta saịtị m na njedebe. Dị ka chioma ga-enweta ya, M nọ na a mma elu larịị nzukọ na ụfọdụ nnọọ akpa ahịa folks si n'obodo Indianapolis maka anyị kwa ọnwa Marketing Book Review.
So… with my site down and many of my friends calling, emailing, and instant messaging m, amaghi m ya niile. Alaghachiri m oche m ma nwee ozi, oku, IM, ozi ederede…. oops.
Ekele dịrị gị niile ndị nwara ijide m! Enwere m ekele maka ya. Ozugbo m hụrụ okwu a, emegharịrị m saịtị ahụ ngwa ngwa gaa na ngwugwu siri ike karị nke nwere ọtụtụ ohere maka mgbasa na MySQL max threading. Ndo maka o downtime.
Feb 8, 2007 na 6:01 PM
Onegwọ onye na-akwụ maka ịga nke ọma!